MEAT | Food Magazine Myanmar
အမဲရိုးနုစွပ်ပြုတ် (Beef Soft Bone Soup)
by Syi Lwin for Food Magazine စွပ်ပြုတ်သောက်ရင် အရိုးကိုက်ပြီးမှ သောက်တတ်ကြတဲ့သူတွေအတွက် ရှယ်စွပ်ပြုတ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အမဲရိုးနု – ၃၅ ကျပ်သား ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ မြွှာ (အခွံနွှာပြီး ဓားပြားရိုက်ပါ) ချင်း – လက်တစ်ဆစ် ....
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် အမဲစွပ်ပြုတ် (Simple Spicy Beef Soup)
by Syi Lwin for Food Magazine စွပ်ပြုတ်ဆိုတာ အရသာ အာဟာရ ရရှိရမယ်လို့ စားသုံးသူတိုင်း အတွေးရှိထားတဲ့ အစားအစာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အမဲအကြော – ၂၅ ကျပ်သား အမဲသား – ၃၀ ကျပ်သား ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ ....
Beef Ball Pasta Soup
မိုးအေးအေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းလျာပါ။ အသားကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသားနဲ့ အစားထိုးလို့ရသလို အသားလုံးကို အရသာသွင်းရင်လည်း နှစ်သက်သလို ဟင်းခတ်ရွက်၊ အမွှေးအကြိုင်တွေကို သုံးလို့ရပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ရအောင်…။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အမဲသားလုံးနယ်ရန် အမဲကြိတ်သား – ၃၀ဝ ဂရမ် စပါးလင် – ၁၀ ဂရမ် (နုပ်နုပ်စဉ်း) ....
Beef Kebab with BBQ Sauce (အမဲသားကင်နှင့် ဘာဘီကျုဆော့စ်)
by နန်းအုအုခင် for Food Magazine နန်းအုက ဒီလမှာတော့ Food Magazine ပရိသတ်ကြီးအတွက် Beef Kebab with BBQ Sauce (အမဲသားကင်နှင့် ဘာဘီကျုဆော့စ်) ကို ချက်ပြထားပါတယ်။ အမဲသား မစားတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဝက်သား၊ ကြက်သားအစရှိသည်တို့ကို ....
၀က်သားစဉ်းကောနှင့် ဗိုလ်စားပဲ ခရုဆီဟင်းလျာ
by အံ့ဝင့်ထွဋ် for Food Magazine အဲဒီဟင်းလျာလေးက ပါဝင်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့ အရသာလည်းရှိပြီး အချိန်ကုန်လည်း သက်သာတဲ့ ဟင်းလျာလေးပါ။ မနက်အလုပ်သွားခါနီးမှာ ထမင်းချိုင့်ပြင်ဆင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေစေမယ့် ဟင်းလျာလေးပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဝက်သားစဉ်းကောသား – ၂၀ဝ ဂရမ် ဗိုလ်စားပဲတောင့် – အချောင်း ၂၀ ....
၀က်နံရိုးနှင့် မျှစ်ချဉ်ဟင်း (Myanmar Pork Spare Ribs & Fermented Bamboo Shoot Curry)
by Chef Sunny for Food Magazine ဒီလအတွက် ပရိသတ်များကို ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ ဟင်းလျာလေးကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းလျာတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဝက်နံရိုးနှင့် မျှစ်ချဉ်ဟင်းလေးပါပဲ။ ဝက်နံရိုးအသားထူထူလေးကို မျှစ်ချဉ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးနဲ့ရောပြီး အာလူးလေးနဲ့ချက်တာကို ကျွန်တော်တို့တွေ သိပ်ကြိုက်ကြပါတယ်။ အာလူး ထည့်ချက်တာကတော့ ....
စပိန် နွားမြီးစတူး (Spanish OX’s Tail Stew)
by Chef Sunny for Food Magazine ဒီလအတွက် နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းလျာလေးကတော့ စပိန်လူမျိုးတွေနဲ့စပန်းနစ်ရ်ှဘာသာစကားပြောတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ “စပိန် နွားမြီးစတူး” ဟင်းလျာလေးပါပဲ။ ပြင်ဆင်ရတာ လွယ်ကူပြီး အရသာလည်း အလွန်ထူးခြားသလို ....
ဒေသရိုးရာ တိုင်းရင်းအစားအစာ (ဓနုဟင်းလျာ အီကုတ်ဆူးပုပ်ရွက်ကြော်နှင့် ကိုင်းခရမ်းချဉ်သီး အညာခက်ျ)
by စံလွင် (ငါးဦးစီး) for Food Magazine အီကုတ်ဆိုတာ နောက်ချေးပိုးဥက ရတဲ့ သားလောင်း (Lavae) ဖြစ်ပြီး နှစ်ခြိုက်သူတွေက ဟင်းလျာအဖြစ် စားသုံးကြပါတယ်။ အီကုတ်က တစ်နှစ်မှာ မတ်၊ ဧပြီနှင့် မေလတို့အတွင်းမှာသာ ရရှိနိုင်တဲ့ ရာသီစာဟင်းလျာပါ။ ပင်းတယဈေးမှာ အဲဒီလများအတွင်း ....
by ပန်းခရေ for Food Magazine ဝက်ဦးနှောက် စဥကြော်က ကလေးနဲ့ လူကြီးကြိုက်တဲ့ အရသာလေးပါ။ အထဲက နူးညံတဲ့ ဝက်ဦးနှောက်ကို အပြင်က ကြွပ်ကြွပ်ရွရွဖြစ်အောင် မုန့်နှစ်ကပ်ကြော်ထားလို့ စားရတာ မအီစေဘဲ အရသာတစ်မူထူးခြားပါတယ်။ မန်ကျည်းမှည့်ဆော့စ်လေးနဲ့ တွဲဖက်လိုက်တော့ ကလေးနဲ့ လူကြီးကြိုက်တဲ့ အရသာလေးပါရှင်။ ....
၀က်ဆီဖတ် ကန်စွန်းရွက် ကြက်သွန်မြိတ် ပဲပုပ်ကြော်
by ပန်းခရေ for Food Magazine ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပဲပုပ်မီးကင် – ၁ ချပ် ကန်စွန်းရွက် – လက်တစ်ဆုပ် ကြက်သွန်မြိတ် – လက်တစ်ဆုပ် ဝက်ဆီဖတ် – ၅ ကျပ်သား ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ ဥ ဆီ ....
by အံ့ဝင့်ထွဋ် for Food Magazine ဒီဟင်းလျာက ခံတွင်းမြိန်စေမယ့် ဟင်းလျာလေးပါ။ အရသာပြင်းပြင်းနဲ့ စားချင်စိတ်လည်းဖြစ်စေတဲ့ ဟင်းလျာလေးပါ။ အစပ်အရသာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ လုံးဝကွက်တိပါပဲ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဝက်သားစဉ်းကော – ၂၀ဝ ဂရမ် တိုဟူး – ၁၅၀ ဂရမ် ငရုတ်သီး ....